Chirangaridzo Cherufu rwaJesu cha2014
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Maltese Maya Mizo Mongolian Moore Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Papiamento (Aruba) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zulu
NYAYA IRI PAKAVHA | ZVAWAKAITIRWA NAMWARI
Chiitiko Chausingafaniri Kupotsa
Usiku hwokupedzisira asati apa upenyu hwake, Jesu akarayira vateveri vake vakatendeka kuti vayeuke chibayiro chake. Achishandisa chingwa chisina mbiriso uye waini tsvuku, akatanga kunonzi Kudya kwaShe Kwemanheru ndokubva avarayira kuti: “Rambai muchiita izvi muchindiyeuka.”—Ruka 22:19.
Zvapupu zvaJehovha munyika yose zvinoungana kuti zviyeuke rufu rwaJesu pamusi warwakaitika gore rimwe nerimwe. Muna 2014, Chirangaridzo chichaitwa musi weMuvhuro, 14 April zuva ranyura.
Unokokwa kuti upinde musangano uyu. Pachataurwa mamwe mashoko nezvezvinorehwa nerufu rwaJesu rwechibayiro. Kupinda musangano wacho hakubhadharwi. Hapana mari ichaunganidzwa. Munhu akakupa magazini ino anogona kukuudza nguva uye kuchaitirwa Chirangaridzo chacho munzvimbo yenyu, kana kuti unogona kutsvaka mashoko panzvimbo yedu yokubudisira mashoko paIndaneti, pajw.org. Tapota usakanganwa nezvechiitiko ichi, uye tinovimba kuti hausi kuzochipotsa.